“Way Adag Tahay In Ronaldo Iyo Messi Mar Dambe Ciyaaraan Koobka Adduunka” – Jose Mourinho Oo Sheegay In Xiddigaha Portugal Iyo Argentina Ay Ku Adkaan Doonto Inay Soo Laabtaan – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeAfricaWararka Somaliga Ah“Way Adag Tahay In Ronaldo Iyo Messi Mar Dambe Ciyaaraan Koobka Adduunka” – Jose Mourinho Oo Sheegay In Xiddigaha Portugal Iyo Argentina Ay Ku Adkaan Doonto Inay Soo Laabtaan
“Way Adag Tahay In Ronaldo Iyo Messi Mar Dambe Ciyaaraan Koobka Adduunka” – Jose Mourinho Oo Sheegay In Xiddigaha Portugal Iyo Argentina Ay Ku Adkaan Doonto Inay Soo Laabtaan
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo mar dambe kuma arki doono Koobka Adduunka, waxaanay sannadkan haystaan fursaddoodii ugu dambaysay ee ay taariikhda ku geli lahaayeen, sida uu aaminsan yahay Jose Mourinho.
Tababaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa sheegay labada ciyaartoy ee Ronaldo iyo Messi ay ciyaarayaan Koobkii Adduunka ee ugu dambeeyey, wixii hadda ka dambeeyana aanay da’doodu u saamixi doonin inay kusoo laabtaan.
Kabtanka Xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ay da’diisu tahay 33 jir, halka Kabtanka Argentina ee Lionel Messi uu 30 sannadood jiray, waxaana Koobka Adduunka ee dambe uu iman doonaa iyadoo da’doodu kala tahay 37 jir iyo 34 jir, taas daraadeedna way yar yihiin fursadaha mar dambe lagu daawan doono iyagoo Koob Adduun ciyaaraya.
Tababare Jose Mourinho waxa uu sheegay in labadan ciyaartoy ay yimaaddeen Koobka Adduunka iyagoo og suurtogalnimada in markoodii ugu dambaysay ay tahay.
“Labadooduba waxay yimaaddeen Koobkan Adduunka, laga yaabaa inuu yahay kii ugu dambeeyey.” Sidaas ayuu yidhi Jose Mourinho.
Weeraryahanka Real Madrid ee Ronaldo iyo xiddiga Barcelona ee Messi marka laysku daro koobka Champions League ee ay ku guuleysteen waa sagaal, horyaalka LaLiga na waxay ku guuleysteen 11 jeer.
Cristiano Ronaldo ayaa ka caawiyey Portugal inay ku guuleystaan Koobkii Qaramada Yurub ee Euro 2016, hase yeeshee Lionel Messi wali umay suurtogelin in xulka qarankiisa ee waaweyn uu guul koob ah la hantiyo.
Labada ciyaartoyba waxay hadda ka qayb-gelayaan Koobka Adduunka markoodii afraad, balse way adkaan doontaa in mar dambe ay soo laabtaan sida uu Mourinho aaminsan yahay.
Tababaraha Manchester United oo u warramay warbaahinta Ruushka ee RT, ayaa waxa uu yidhi: “Qof walba wuu ogyahay in tobankii sannadood ee tegay ay Ronaldo iyo Messi ahaayeen ciyaaryahannada caalamka ugu wanaagsan. Waxayna isku dayeen inay wax walba oo wanaag ah u sameeyaan waddamadooda.”
Mourinho oo la waydiiyey labadan ciyaartoy awoodi doonaan inay yimaaddaan Koobka Adduunka ee 2022, waxa uu ku jawaabay: “Cristiano waa Superman. Wuu ciyaari karaa Koob Adduun kale haddii uu doono, laakiin inuu heerkaa sare sii joogo way adkaanaysaa. Dabcan, Lionel wuu yaryahay, si wanaagsan ayaanu u iman karaa Koobka Adduunka afar sannadood kaddib, laakiin waxay ila tahay in toddobaad kasta oo la ciyaaro, laba ama saddex ciyaarood toddobaad kasta oo Barcelona iyo Real Madrid ah, LaLiga, Champions League, xulka qaranka, waxay ila tahay in dhamaantood oo la xamilo iyo afar sannadood oo soo socda oo heekaa sare ah ay adkaan doonto. Labadooduba waxay xirfaddooda ku dhamaysan doonaan iyagoo isku dayaya waxa kaliya ee ka maqan.”
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego qaab ciyaareedka labadan xiddig way dhici kartaa in Lionel Messi uu si wanaagsan usoo laabto afar sannadood kaddib haddii aanay haleelin dhaawacyo ama niyad-jab sababa inuu ka fadhiisto ciyaaraha caalamiga sidii horeba u dhacday, hase yeeshee, Cristiano Ronaldo oo haddaba la ogyahay in hoos u dhac u bilaabmay ayaan afar sannadood kaddib yeelan doonin fursad, balse wakhtiga ayaa sheegi doona siday wax noqdaan.